Ny maha-zava-dehibe ny psikolojia ny loko amin'ny zavakanto sy ny endrika | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | maro
Ny maha-zava-dehibe ny psikolojia ny loko amin'ny zavakanto sy ny endrika tena zava-dehibe ao anatin'ny zava-kanto sary sy ivelany izany. Ny loko dia fiteny iray izay mandefa hafatra mahery tahaka ireo ampitaina amin'ny sary sy endritsoratra. Loko iray no hisy foana mifandray amin'ny fihetsem-po, mpanafika iray izay mampifandray hafatra faharoa izay mahomby amin'ny fampitana ny karazana fihetsem-po.
Ny loko efa a singa fototra amin'ny kanto izay nampiasain'ny mpanakanto amin'ny endriny rehetra ho toy ny singa ifotony amin'ny sanganasan'izy ireo, loko mena no haneho ny fientanentanana raha milamina kosa ny manga iray. Ny loko dia mpiray tsikombakomba amin'ny artista foana.
Ny loko sy ny fihetsem-po dia singa mifandraika ka mitantana mba hamoronana fiteny sary izay mifandray amin'ny fomba fahitantsika an'izao tontolo izao. Ny loko na ny loko dia tsy inona fa tsy halavan'ny halavam-potoana izay vitan'ny ati-dohantsika ny mamorona azy rehefa avy hitan'ny masontsika dia ampahany ihany io fa Inona no ampitain'ny loko amintsika? nanana izany fahatsapana fitoniana izany foana isika rehefa mijery filentehan'ny masoandro na fahatsapana angovo rehefa mandeha mamaky ala. Ny fifandraisanay amin'ny loko dia avo dia avo ary mahavita mamindra ny karazana fahatsapana rehetra. Ny loko sasany dia hahatonga antsika hahatsapa ho mavitrika ary ny hafa kosa mifanohitra tanteraka amin'izany, mifototra amin'ity fifandraisana misy eo amin'ny loko sy ny fihetsem-po ity Ny dokam-barotra sy ny zavakanto dia nampiasa ity fitaovana ity ho fitaovam-piadiana hahatratra ny mpijery.
Ny loko dia atambatra amin'ny dvondrona lehibe: mafana sy mangatsiaka. ny loko mafana Ireo no fantatro indrindra manakaiky ny mavo sy ny afo izy ireo, dia loko izay mampita angovo bebe kokoa izy ireo.
ny loko mangatsiaka dia ireo izay manakaiky ny manga sy ny ranomasina izy ireo, ireo loko ireo mandalo fitoniana sy filaminana.
Tokony ho fantatsika izany misy loko mifandraika amin'ny fahatsapana sasany tsara nefa maninona? raha mijery filentehan'ny masoandro isika dia hahita loko volomboasary (mafana) izay mampita ny fahatoniana izy ireo. Ny fahatsapana fitoniana azonao filentehan'ny masoandro asaivo mametraka ny atidohantsika a fifandraisana eo amin'io fotoana tsara io ary ny mampiavaka azy, amin'ity tranga ity ny loko. Ny atidohantsika dia mampiasa ny fifandraisan'ny singa mitohy, ohatra, ampifandraisintsika amin'ny endrik'endrika amin'ny rindrina ny endrika endrika.
Ao amin'ny cine afaka mahita isika maro ny firesahana ny maha-zava-dehibe ny loko sy ny fampiasana azy mba hampitana fahatsapana. Ny sarimihetsika tsirairay dia manana loko manokana satria miankina amin'ny sarimihetsika sy ny tantarany dia tsy maintsy maneho zavatra iray na zavatra hafa izy io. Ny sarimihetsika momba ny fitiavana sy ny fahasambarana dia tsy mitovy amin'ny an'ny tahotra, ny loko izay anehoan'ireo hevitra ireo ny fiovana ary io no ampiasaina mba hampitana bebe kokoa ireo fahatsapana izay tian'izy ireo hisolo tena.
Miankina amin'izay tadiavintsika hisolo tena dia tsy maintsy mampiasa loko na loko hafa isika. Ny loko dia fiteny iray hafa izay tsy maintsy tadidintsika amin'ny karazana tetikasa sary. Rehefa hamorona karazana tetikasa sary tsy maintsy ataontsika isika fantaro hatramin'ny voalohany izay tadiavintsika hisolo tena mba adika sary izany hafatra izany amin'ny alàlan'ny fampiasana loko. Soso-kevitra izany manaova fanomanana mialoha amin'ny karazana tetikasa rehetra alamino tsara ny atiny rehetra amin'ny tetikasanay ary afaka mahatadidy ireo karazana fanontaniana an-tsary ireo. Alohan'ny hanombohana ny asany dia eritrereto izay asehon'ireo loko ampiasainao.
Maneho inona ny lokoko? Inona no tiako hisolo tena? Misy ifandraisany amin'ny zavatra tadiaviko ve ny voloko?
Maneho ny fihetseham-po sy ny hevitra amin'ny loko Asa izay tokony hitandremantsika fatratra satria mpiara-miasa amin'ny lokon'ny fihetseham-po ny loko. Azonao an-tsaina ve ny mahita sarimihetsika mahatsiravina miaraka amin'ny mavokely? Mety ho faty ny nefa mihomehy ...
Lloko dia hifandray amin'ny fihetsem-po foana noho izany dia tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka mialoha mialoha fa izay tadiavintsika hisolo tena dia azo tanterahina amin'ny loko iray. Mianara milalao loko Mitovy amin'ny fomba filalaovanao sary, endrika ary endritsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny maha-zava-dehibe ny psikolojia ny loko amin'ny zavakanto sy ny endrika
Mifanerasera amina endritsoratra vaovao 5 izay tsy tokony ho hita ao amin'ny tranombokinao